Izindaba - Ulwazi loboya, izinhlobo eziningana zoboya obujwayelekile, iyiphi oyithanda kakhulu?
Bhala izinhlobo eziningana zoboya ezivamile kuwe
1, ikati likaLynx
Ikhiqizwa kakhulu e-United States, Canada nase Russia. Nguboya obuhamba phambili obugcina ukufudumala okuqinile, kepha into ebaluleke kakhulu ukuthi ukukhanya okulula kakhulu noboya obubiza kakhulu. Ingxenye ebaluleke kakhulu koboya be-lynx isisu sayo. Uboya bayo obumhlophe obumhlophe bunamachashaza ampunga namnyama.
Njengomunye woboya obuphezulu obungavamile, i-lynx inobumnene obumangalisayo nokukhazimula okungenakuqhathaniswa, futhi iphethini yemvelo ayinabo abanye. Ngenqubo yokwakhiwa kabusha koboya, iphethini eyingqayizivele ye-lynx ingabonakaliswa ngokusobala nangokucacile, okuyinto enhle kakhulu ukuthi ingabonwa.
Umbala wamabanga ahlukanisekayo kusuka kokusundu okumnyama (eduze kokumnyama) kuya koku nsundu ngokukhanyayo okuphuzi / igolide. Izinaliti zoboya ziminyene, zithambile futhi ziyathandeka. Zivame ukusetshenziselwa ukwenza izingubo, ukusika nezinye izinto ezincane, njengezikhafu namashali.
3, iwundlu leSwakara
I-Swakara yisikhumba semvu esingajwayelekile esivela eNamibia. isikhumba sithambile futhi sincane. Isikhumba semvu esiphakeme kunazo zonke emhlabeni. Ngobuhle bayo obuyingqayizivele, ubukhazikhazi bemvelo kanye nejika eliyingqayizivele nelicijile nephethini yentambo, isikhumba segundane le-swakara sesibe ngenye yezinto ezinhle zoboya abaqambi bomugqa wokuqala nezinkampani zemfashini abazifunayo. Iyaziwa njengemboni entsha yemfashini futhi ebizayo, futhi inesihloko esithi "idayimane elimnyama lase-Afrika", ngentengo ephezulu.
Ukuthungwa kwemvelo nokucwebezela okuhlukile nokukhazimula kuletha isitayela
I-chinchilla inaliti ithambile futhi isondele, futhi isandla sizizwa sibushelelezi, futhi kubhekwa njengenye yezindwangu ezimbalwa zikanokusho.chinchilla waseNingizimu Melika manje isivikelwe ngokuphelele endle. Kulinywa eNyakatho Melika, eNingizimu Melika naseYurophu. Iningi lemibala ye-chinchilla inhle ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, umbala ongemuva ubumnyama, umbala ezinhlangothini zombili uya ngokuya ukhanya.
Ngenxa yobukhulu bayo obuncane, ijwayele ukusetshenziselwa ukwenza izingcezu ezincane zemikhiqizo yoboya nokunquma, kepha ibuye isetshenziselwe ukwenza konke ukugqoka koboya, kepha intengo! Kubiza kakhulu ukwenza isiqeshana esincane sesikhumba esinsomi
Ngaphezu kokufudumeza bonke ubusika, ukuthungwa okuthambile kwe-chinchilla kungakulethela ukujabula okungafani nalutho
Uboya be-Fox bunezici zezinwele ezinde futhi buvalwe. Uboya be-Fox bunhlobonhlobo, futhi izinhlobo ezifika ku-20 zihlukaniswe ngemibala, kufaka phakathi okumnyama, obomvu, onsundu nomhlophe.
Inalidi yezinwele zesikhumba se-fox ngokusobala inde kunezinye izinhlobo, okulula kakhulu ukuzibona. Ngakho-ke, isikhumba se-fox sifanele umhlobiso wezintambo, ukwakheka kwezesekeli kanye noboya bemfashini indwangu eyigugu. Isimo soboya beFox esinobuhle nokuthungwa okuhle kwemfashini, kungathandwa kuphela ngabaqambi, kepha futhi kufunwa ngongoti bemfashini.
Ikhola, umkhono, isikhafu, umzimba nomphetho, akunzima ukubona ukuthi isikhumba se-fox siyingxenye yemfashini, sivela embukisweni wesizini ngayinye futhi siqhakambise imfashini.
UMink ungomunye wemikhiqizo yoboya ethandwa kakhulu emfashinini. IMink inemibala ehlukahlukene, kufaka phakathi imibala yemvelo engaphezu kwengu-25, kusuka kokumhlophe kuye komnyama, iparele, i-violet, isafire, umbala onsundu ngokulingene nonsundu onsundu.
Ngisho nesikhwama soboya bendabuko semink manje sesinefomu elisha
Imibala egqamile namaphethini amahle konke kwenza ijazi le-mink esiteji se-T liveze ukukhanya okuhlukile. Ishintsha umbono wendabuko woboya be-mink esikhathini esedlule. Akunakusiza kepha kwenze abantu bazibuze ukuthi uboya be-mink busengaba kanjena yini, bulethe ukukhetha okusha okuyimfashini
IWundlu lingadaywa ngemibala eyahlukahlukene. Emavikini amakhulu emfashini, iwundlu liyabonakala yonke indawo. Izinhlobo ezahlukahlukene zewundlu nazo zingaletha imiphumela yokubuka ehlukile, efana nejazi elihlanganiswe newundlu noboya, noma i-fur trim. Isimo esingenakulinganiswa sejazi lamaWundlu nomphumela onamandla ufunwa ngabasethambisi bemfashini futhi kugxile ngokuphelele emfashinini.
Isikhwama seWundlu, engeza okuncane kwempahla emfashini.
Ihlukaniswe ngeRex Rabbit kanye nonogwaja
Izinwele zikanogwaja ezinhle kakhulu ze-Rex zinokuqina okukhulu, zithambile futhi zihle, zibushelelezi futhi zihlanzekile, futhi zibukeka kahle.
Unogwaja ujiyile futhi unoboya. Kubukeka sengathi kusendle
Mayelana noboya bemvelo
Kunezinhlobo eziningi zoboya bemvelo, ikakhulukazi obuvela eNyakatho Melika, eRussia, enyakatho yeYurophu naseChina. Ngaphezu kwe-90% yemikhiqizo yoboya emakethe ikhulisiwe.
Ukusetshenziswa koboya ngeke nje kulimaze i-ecosystem, kepha futhi ngeke kubangele ukulimala emvelweni. Ukuze kuqinisekiswe ikhwalithi yoboya, abalimi bezilwane bakhathazeke kakhulu ngenhlalakahle yezilwane, futhi baphathe ngokucophelela amapulazi ukuhlinzeka ngokudla okwanele nendawo enhle yokuhlala izilwane. Inani elincane lazo yizilwane zasendle, kepha imisebenzi yokuzingela yezilwane zasendle ilawulwa ngokuqinile ngohulumeni basekhaya: bonke abazingeli kumele bathole amalayisense, futhi inkathi yokuzingela, izinhlobo nobungako bukhawulelwe, ukugcina inani elithile lezinhlobo ezahlukahlukene yezilwane zasendle futhi ugcine ukulingana kwemvelo kwemvelo.
Umthombo: umphathi wendlu, i-copyright yombhali wokuqala